Galmudug iyo Hirshabe oo ku dagaalamayaa Gudoomiye Ku xigeenka 1aad ee aqalka sare.
Galmudug iyo Hirshabe ayaa isku garbinaya cida Heli laheed Gudoomiye Ku xigeenka Kowaad ee Aqalka sare ee dalka.
Kulan caawa ka qabsoomay Hotelka jasiira Ayaa Lagu kala tegay, waxaana ujeedka kulankaasi ahaa in Sanater shacbaan oo Hirshabelle ah inuu u tanasulo Sanater C/xakiin Macalin Axmed oo daneenaya Xilka Gudoomiye Ku xigeenka 1aad ee aqalka sare Balse waa Lagu kala istaagay.
Ilo ka Tirsan aqalka sare ayaa sheegaya in Xildhibaano Labada aqal ah ay Halkaasi isugu tageen Kuwaas oo saaxiibo dhaw la ah Cali Guudlaawe iyo Axmed Qoor Qoor.
Kulankaasi waa Lagu kala istaagay waxaana Dagaalka ugu Culus uu dhexmari doonaa Hirshabelle iyo Galmudug oo kala Taageeraya 2 Musharax, waana tan xiisaha Gaarka ah u yeelaysa Doorashada aqalka sare ee dalka
« Wasiirka maaliyadda Soomaaliya oo Bangiga adduunka kala hadlay dayn cafinta Soomaaliya kadib digniintii hay’adda IMF